Archbishop a chụọla onye ọkà mmụta a ma a ma maka na ọ kajọrọ Amoris Laetitia – gloria.tv
Na August 31 Archbishop Javier Martínez Fernández nke Granada, Spain, chụrụ onye ọkà mmụta a ma a ma bụ Josef Seifert, 72, onye na-akuzi na archdiocesan Philosophical Institute Edith Stein. Ihe kpatara ya: Seifert kajọrọ akwụkwọ Amoris Laetitia mgbe gara a ga.
Martínez kwuputara n'akwụkwọ ozi na edemede abụọ Seifert dere maka Amoris Laetitia "gbagwojuru anya" maka ndị okwukwe nakwa "mebie iyi nke ụka". Seifert gosiri na edemede ya site na nka na Amoris Laetitia ga-ebute mmebi iwu agwa.
N'otu aka ahụ, Martinez kwenyere na ahịrị nkuzi nke Amoris Laetitia nke Bishọp nke Buenos Aires, Argentinia, nke kwere na ndị ọkwa iko ga-anata oriri nsọ, nke gajọrọ ozi ọma Chukwu, nakwa iwu nzụkọ Katọlik.